Banyere Anyị - Shanghai Yangli Ngwá ụlọ Ihe Co., Ltd.
Ihe nkiri slide
Ball Iburu Draịvụ
Na-adọrọ Mmịba Ihe Ntinye
Ntụ ntụ mkpuchi slide
Cabinet Door adabere
Micro Gear mgbapụta
Ngosi na ndị ahịa
Onodi Of Company Anyị
Shanghai Yangli Ngwá ụlọ Ihe Co., Ltd.
You ga-ntabi-eche anyị ọkachamara na enyịn ese ọrụ.
Na-agbaso nkà ihe ọmụma azụmahịa nke iguzosi ike n'ezi ihe ma na-emeso ndị mmadụ otu ihe, GERISS kwadoro inye ndị ahịa ọrụ kachasị mma.
Anyị na-anabata gị ka ị gaa na ụlọ ọrụ anyị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe ngosi anyị gosipụtara ngwaahịa dị iche iche ga-ezute atụmanya gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe achọrọ maka ngwaahịa anyị ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị ugbu a. Anyị na-ele anya ịnụ n'ọnụ gị n'oge na-adịghị anya.
Companylọ ọrụ anyị SHANGHAI YANGLI FURNITURE MATERIAL CO., LTD guzobere na 1999, na-elekwasị anya na ngwaike ngwaike ngwa mmepe na mmepụta. Anyị na-arụ ọrụ ugbu a ụlọ ọrụ R&D abụọ na steeti ụlọ ọrụ nka na Shanghai na Foshan, Guangdong. Anyị na ngwaahịa na-ere n'okpuru atọ ukwuu reputable ụdị:YANGLI, Geris, Ndụ. Ha bụ sistemụ drawer, ihe nkiri zoro ezo, ihe nkiri bọọlụ, ihe ngosi tebụl, zoro ezo zoro ezo, njikwa, ihe mkpuchi oven na ngwa ọrụ akụrụngwa ndị ọzọ, nke eji arụ ụlọ, oche, ngwa ụlọ na mkpanaka Ngwaahịa anyị enwetala aha n'etiti mba 40 n'ụwa.
Ihe omuma ahia anyi gbadoro ukwu nke “Round Sky and Square Earth, Striving and Studying”, Okwu Omenala China. Ndị ọrụ anyị ketara ma bie ndụ site na ụkpụrụ a na ọ nweghị ihe a ga-arụzu na-enweghị usoro ma ọ bụ ụkpụrụ, yana azụmaahịa anyị kwesịrị ịgbaso iwu na ụkpụrụ na omume anyị kwa ụbọchị. Anyị ike ume mgbe niile mma na mmepe nke anyị na ngwaahịa na Filiks na onye mesiri ike na azụmahịa ụkpụrụ ọma.
Mgbe anyị gbalịsịrị ike na ngwaike ngwaike, gụnyere drawer slide, mgbatị ụlọ, mgbanaka oven, aka na ngwa ndị ọzọ, anyị enwetala aha dị elu n'etiti ụlọ ndị America, arịa ndị siri ike, ngwa ụlọ na ubi ndị ọzọ.
Elekwasị anya na mmepe na mmepụta nke ngwa ngwaike akụrụngwa
Ekwentị: 021-66350149 / 66368006
Adreesị Companylọ Ọrụ: 20lọ 205, B ụlọ, 5589 Hutai Road, Baoshan District, Shanghai, China.
Adreesị ụlọ ọrụ: No.10 Yonghe Road, Renhai Industry ebe, Leliu Town, Foshan City, China.